Wikipedia:Mpikambana - Wikipedia
Titre correct : « Mpikambana »
Misy mpikambana 22 748? eto amin'ny wikipedia malagasy ankehitriny (hanokatra kaonty eto)
Ny Mpikambana, manana sy tsy manana kaonty eto amin'ny wikipedia malagasy, mety manana sata maro ny mpikambana ny Wikipedia.
Ny farany ambany indrindra dia ny mpikambana IP, Ny mpikambana IP dia vitsy no zavatra afa azo ataony ankotran'ny manolo sy mamorona pejy, fa misy pejy sasany tsy afaka ovainy satria izy ireo mety voaaro, an-tsasany oatra, kanefa ny mpikambana voasoratra eto afaka manolo an'io pejy io efatra andro teo arinan'ny fisoratany teto. Tsindrio eto rehefa tia hanoratra anarana ianao.
Rehefa manomboka mahaihay mitanana ianao, afaka mangataka ho mpandrindra ianao, mangataha eto. Rehefa tsara ho anao ny fifidianan'ny kômonitia, ampetrao eto ny fangatahanao (amin'ny fiteny anglisy) ary ampio eo ity rohy ity :
Rehefa manomboka miangeza ity Wikipedia ity, afaka lasa Borôkraty ny mpandrindra : Fa mandalo eo amin'ny fangatahana koa ny mpandrindra izay tia ho borôkraty.
Ny Borōkraty dia mpandrindra mitantan'ny sata ny mpikambana eto amin'ny wikipedia.
Ny fanangatahana ho borōkraty dia tokony atao eto, ny fanangatahana hapetraka amin'ny borôkraty dia tokony atao eto amin'ny hanontany borôkraty. Fa ny fanangatahana ho borôkraty tokony atao eo amin'ny Borōkraty/fanangatahana.
Mpikambana tia ho Borōkraty[hanova ny fango]
Jereo ny pejy Borōkraty/fanangatahana
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Mpikambana&oldid=28026"
Voaova farany tamin'ny 26 Martsa 2009 amin'ny 11:49 ity pejy ity.